Ardam left Burmese Ghouls MLBB – Gaming Noodle
Burmese Ghouls MLBB ကနေ ထွက်ခွာခဲ့တဲ့ Ardam
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိအောင်မြင်မှု အများဆုံး Mobile Legends အသင်းဖြစ်တဲ့ Burmese Ghouls အသင်းရဲ့ Mage Player “Ardam” ဟာ အသင်းကနေ ထွက်သွားခွားခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Ardam ဟာ Burmese Ghouls MLBB မှာ တစ်နှစ်ခန့် ဆော့ကစားခဲ့တာဖြစ်ပြီး အသင်းရဲ့ အမြင့်ဆုံး အောင်မြင်မှုတွေတိုင်းမှာ တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေ ပါဝင်ခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
2018 MSC Myanmar Qualifier Champion
2018 MSC Main Event at Indonesia
Huawei Nova Mobile Legends Champion
MPL Myanmar Season (1) Champion
SEA Clash of Champions Tournament at Singapore
First Runner-up MPL Myanmar Season (2)
စတဲ့ ပြိုင်ပွဲ အတွေ့အကြုံနဲ့ အောင်မြင်မှုတွေအပြင် Huawei နဲ့ Ooredoo ရဲ့ ကြော်ညာ အချို့မှာလည်း BG အသင်းသားများနဲ့ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ အမှတ်တရများစွာ ရှိခဲ့ပါတယ်။
Ardam အသင်းမှ ထွက်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကို မသိရပေမယ့် MSC 2019 Philippines ပြိုင်ပွဲ နီးကပ်နေချိန်မှာဖြစ်လို့ Player ဖက်ရော အသင်းရော နှစ်ဖက်လုံးအတွက် နစ်နာမှု အနည်းငယ်တော့ ရှိမှာ အသေအချာပါပဲ။
ထိုကွဲကွာမှုဟာ မကြာသေးမီက ကျင်းပခဲ့တဲ့ MPL Myanmar Season (2) Grand Final ပွဲအဖြေကလည်း အနည်းနဲ့ အများ သက်ဆိုင်နေမယ်လို့တော့ ယူဆရပါတယ်။
Ardam ဟာလည်း ဘယ်အသင်းကို ရောက်ရှိမယ်ဆိုတာ မကြေညာသေးပေမယ့် အနာဂတ်မှာ အောင်မြင်မှု ရရှိပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
Huawei Nova ML Championship 2018 Winners
Burmese Ghouls အသင်း ဟာလည်း Player အသစ် ထပ်ခေါ်ဖို့ အစီအစဉ်မရှိသေးပဲ လက်ရှိကျန်ရှိနေတဲ့ Ruby DD, PVNDV, CG-0-, ICE ICE, ACE လူစားရင်းနဲ့ ဖိလစ်ပိုင်မှာ MSC 2019 ကို Team Resolution နဲ့တူတူ မြန်မာကိုယ်စားပြု သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
Burmese Ghouls အသင်းအနေနဲ့လည်း လွတ်သွားတဲ့ Ardam ရဲ့နေရာကို အကောင်းဆုံးဖြည့်ဆည်း နိုင်ရန် လေ့ကျင့်ပြီး အောင်မြင်မှု ရရှိနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
Burmese Ghouls MLBB ကနေ ထှကျခှာခဲ့တဲ့ Ardam
မွနျမာနိုငျငံရဲ့ လကျရှိအောငျမွငျမှု အမြားဆုံး Mobile Legends အသငျးဖွဈတဲ့ Burmese Ghouls အသငျးရဲ့ Mage Player “Ardam” ဟာ အသငျးကနေ ထှကျသှားခှားခဲ့ပွီပဲ ဖွဈပါတယျ။
Ardam ဟာ Burmese Ghouls MLBB မှာ တဈနှဈခနျ့ ဆော့ကစားခဲ့တာဖွဈပွီး အသငျးရဲ့ အမွငျ့ဆုံး အောငျမွငျမှုတှတေိုငျးမှာ တဈထောငျ့တဈနရောကနေ ပါဝငျခဲ့သူလညျး ဖွဈပါတယျ။
စတဲ့ ပွိုငျပှဲ အတှအေ့ကွုံနဲ့ အောငျမွငျမှုတှအေပွငျ Huawei နဲ့ Ooredoo ရဲ့ ကွျောညာ အခြို့မှာလညျး BG အသငျးသားမြားနဲ့ ပါဝငျခဲ့တဲ့ အမှတျတရမြားစှာ ရှိခဲ့ပါတယျ။
Ardam အသငျးမှ ထှကျရတဲ့ အကွောငျးအရငျးကို မသိရပမေယျ့ MSC 2019 Philippines ပွိုငျပှဲ နီးကပျနခြေိနျမှာဖွဈလို့ Player ဖကျရော အသငျးရော နှဈဖကျလုံးအတှကျ နဈနာမှု အနညျးငယျတော့ ရှိမှာ အသအေခြာပါပဲ။
MPL Myanmar Season (1) Champions
ထိုကှဲကှာမှုဟာ မကွာသေးမီက ကငျြးပခဲ့တဲ့ MPL Myanmar Season (2) Grand Final ပှဲအဖွကေလညျး အနညျးနဲ့ အမြား သကျဆိုငျနမေယျလို့တော့ ယူဆရပါတယျ။
Ardam ဟာလညျး ဘယျအသငျးကို ရောကျရှိမယျဆိုတာ မကွညောသေးပမေယျ့ အနာဂတျမှာ အောငျမွငျမှု ရရှိပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးပါတယျ။
Burmese Ghouls အသငျး ဟာလညျး Player အသဈ ထပျချေါဖို့ အစီအစဉျမရှိသေးပဲ လကျရှိကနျြရှိနတေဲ့ Ruby DD, PVNDV, CG-0-, ICE ICE, ACE လူစားရငျးနဲ့ ဖိလဈပိုငျမှာ MSC 2019 ကို Team Resolution နဲ့တူတူ မွနျမာကိုယျစားပွု သှားရောကျယှဉျပွိုငျမယျလို့ သိရှိရပါတယျ။
Burmese Ghouls အသငျးအနနေဲ့လညျး လှတျသှားတဲ့ Ardam ရဲ့နရောကို အကောငျးဆုံးဖွညျ့ဆညျး နိုငျရနျ လကေ့ငျြ့ပွီး အောငျမွငျမှု ရရှိနိုငျပါစလေို့ ဆုတောငျးလိုကျပါတယျ ခငျဗြာ။
Ardam quits from Burmese Ghouls MLBB
According to the official statement of Burmese Ghouls, the most successful MLBB team in Myanmar, their Mage player “Ardam” left the team yesterday.
Ardam joined Burmese Ghouls one year ago and he was part of their most memorable achievements.
These are list of his achievements with Burmese Ghouls team and he also appeared in Huawei and Ooredoo commercial with other BG members.
Although we cannot confirm the cause of Ardam leaving BG, it is not good for both parties since MSC 2019 in Philippines is only two weeks away. It can be assumed as the aftermath of losing 3-0 against Team Resolution in MPL Myanmar Season2Grand Final.
Ardam has not announced the team he is joining next. But we wish will to haveasuccessful career ahead.
Since Burmese Ghouls still has5players in their roster (Ruby DD, PVNDV, CG-0-, ICEICE & ACE), they will travel to Philippines with this roster to compete in MSC 2019 together with Team Resolution to represent Myanmar.
We also wish Burmese Ghouls to perform well in upcoming tournaments.
#BurmeseGhouls #Ardam #MSC2019 #MLBB